« Aoka fa tsy tsara ny zava-mahadomelina » : fanentanana tao amin’ny CHT | Grandir à Antsirabe
« Aoka fa tsy tsara ny zav-mahadomelina » : fanentanana tao amin’ny CHT nataon’ny SOLIMEDA
Sary miaina kely ary aloha hanombohana azy !
« Alatsinainy ny andro, voalohan’ny volana jolay, nipaika ny tamin’ny 6 ora sy sasany, efa ela no maizina ny andro! Ririnina tokoa ny andro! Ireny fa nivoaka ny trano fidiovana ny ankizy: manodidina ny folo eo izy ireo, nangatsiaka angamba fa niazakasaka haingana hiditra ato ato antrano, somebiseby ery manao ny akanjo mandriny avy.
Efa ireo i Agathe, i Anaïs , i Hélène ary i Maureen, mpikambana 4 avy ao amin’ny fikambanana SOLIMEDA, fa efa vonombonona miandry ny ankizy, io eo koa i Nandrianina, mpiandraikitra ny fanentanana ato amin’ny fikambanana : ity no fanentanana fahefatra sady farany ataon’ireto tanora avy ao amin’ny SOLIMEDA ireto amin’ny ankizy ato amin’ny CHT. Hiresaka momba ny zava-mahadomelina: sigara, toaka ary rongony izahay anio hariva.
Natomboka tamin’ny fandefasana sary miaina fohy fanentanana : nandeha moramora ity vorona iray ary nahita zavatra (voankazo) iray boribory miloko mavomavo toa volamena. Nisotro ny ranon’ ilay izy iza ka nanjary niova loko sy nanidina teny amin’ny habakabakaba niloko mavo, rotsirotsian’ny mozika malefaka; nitontona moramora tamin’ny tany indray izy avy eo ary niverina tamin’ny tontolony izay mainty sy fotsy. Nanohy ny diany hatrany izy ary nahita an’ilay zavatra boribory indray, mbola nogohany indray io dia finaritra ery izy nankafy ny fafinaretana naterakan’izany teo eo amin’ny tenany sy ny tontolony indray. Tsy dia naharitra toy ilay teo aloha instony anefa ilay fafinaretana. Haingana dia tapitra ilay izay sady toa niverina tampoka tamin’ny tontolo tena izy. nitohy hatrany ny horonan-tsary. Niha miloko volondavenina ilay vorona, niha fohy dia fohy ny fahatsapany ilay fafinaretana, lasa nanenjika ilay zavatra miloko mavo sisa no nataony, farany niha-maizina ny tontolo nisy azy.
Fizarana voalohany : Ny sigara
Natombokan’i Agathe tamin’ny fanontaniana an’ireo ankizy ny resaka : efa nifoka sigara ianareo? Inona no antony? Ny iray nitantara ny areti-nifiny izay tsy nitony raha tsy nihinana paraky, ny hafa indray, ny fitarihan’ny namany. Nampisehoana sarina nify mainty sy efa simba tanteraka izy ireo avy eo: nankaloiloy ahy ny nijery izany fa nampihomehy kosa an’ireo ankizy! Nijanona tampoka ny hehin’izy rehetra nampisehoana ity sarina havokavoka mainty sy efa godraka. Nanontany ny ankizy iray hoe : « Toy izao ihany koa ve ny voka-dratsiny na dia tsy atelina aza ny setroka rehefa mifoka sigara ? », iray hafa kosa nanontany raha mbola afaka averina amin’ny taloha ireny fahasimbana ireny : tsapa mihintsy hoe voakasiky tanteraka izy ireo.
I Anaïs indray no nandray ny fitenenana teto amin’ity fizarana faharoa ity. “Iza avy no efa nisotro toaka?”, nitsangana avy hatrany ny tanana maro izay efa tsy taitra amin’io fanontaniana io intsony. Ny antony? Betsaka ary matetika tsy ampoizina: ny hanoanana, ny hatsiaka, ny iray nisotro izany ho toy ny fanafody, ny sasany indray faly be avy nampiady akoholahy! Eto koa dia hitako ho tena mahalala zavatra tokoa izy ireto: hainy tsara ny mitantara ny hafanana misoko ao amin’ny tratra, ny fiovan’ny famindra rehefa avy nisotro betsabetsaka izay.
Avy eo dia azavain’i Anaïs toa an’ilay lohahevitra momba ny sigara teo ihany koa ny voka-dratsy sy ny loza mifandraika amin’ny fisotroan-toaka. Nasehony ara-tsary ny faritra miasa amin’ny ati-dohan’olona iray mamo izay hita vitsy anisa tokoa mitaha ny ao amin’ny ati-dohan’olona salama tsara. Gaga ity ankizy iray: “ izaho nefa, rehefa misotro dia mahatsiaro zavatra be dia be.” Samy mitantara eo ireo ankizy, tsara izany sady ahafahana manitsy ireo hevi-diso fantany.
Roa na telo amin’ireo ankizy ihany no voakasik’ity lohahevitra izay entin’I Maureen ity. Ny rongony amin’ny ankapobeany, dia mahatonga azy ireo hahatsapa ho toy ny matanjaka be ary manampy azy amin’ny filanjana zavatra mavesatra izany, rehefa miasa izy; dia toy ny sigara ihany koa, ny namany ihany no nianaran’ireo izay efa nanandrana ireo.
45 minitra izay no lasa, manomboka reraka ny ankizy ka fotoana tokony ijanonana amin’izay angamba izao.